" /> कश्मीर हमलाका २२ वर्षे नाइके: जसले हमलाअघि भनेका थिए ‘मेराे नाम सुनाैलाे अक्षरमा लेखिन्छ !’::Bandipur Times
काठमाडौं : कश्मीरको पुलवामामा एक साताअघि ४४ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हमलाको तरंग पाकिस्तान र भारत मात्रै नभएर अन्य शक्तिशाली मुलुकमा समेत पुगिसकेको छ ।
जैश ए मोहम्मदले जिम्मा लिएको उक्त आत्मघाती विस्फोट कसले गरेका थिए त ? यसअघि पनि आतंकवादी गतिविधिको जिम्मा लिँदैआएको उक्त भूमिगत अतिवादी समूहले पुलवामाको हमलामा कसलाई प्रयोग गरेको थियो भन्ने बारे अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले केही चर्चा गरिसकेका छन् ।
को थिए त हमलाकारी ?
१४ फेब्रुअरीको उक्त हमला अदिल अहमाद दर नाम गरेका २२ वर्षे युवकले गरेको बताइएको छ । जो हमला भएको ठाउँबाट १० किलोमिटर मात्रै पर बस्दैआएका थिए । ‘द प्रिन्ट’का अनुसार ११ कक्षामा अध्ययनरत अदिम गत वर्ष मात्रै जैश ए मोहम्मदको समुहमा लागेका थिए । कश्मीरस्थित प्रहरी रिपोर्टको हवाला दिँदै मिडियाले ती व्यक्ति समुहमा जोडिएदेखि नै सुरक्षा फौजमा सक्रिय रहँदैआएका थिए ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनी ‘अध्ययनरत छँदादेखि नै उच्च रुपमा कट्टरपन्थी थिए । र जैश ए मोहम्मदमा संलग्न भएका थिए ।’ दर अदिल अहमद गादी तक्रानेवाला र गुन्दिबागका वाकास कमान्डो नामले पनि चिनिन्थे । प्रहरीको रिपोर्टका अनुसार अदिल ‘सी’ ग्रेडका लडाकु थिए ।
उनका बावु घुलाम हसन दर भने काकापोरा क्षेत्रमा एउटा पसल चलाउँदैआएका छन् । केही अघि छोरा हराएपछि उनले प्रहरीसमक्ष उजुरी समेत दर्ज गरेका थिए । तर अदिलले ‘वाकास कमान्डो’ लेखिएको कोडनेम सहित एके ४७ बोक्दै गरेको तस्बिर जब सामाजिक संजालमा सार्वजनिक भयो, प्रहरीको खोजीकार्य पनि टुंगियो । इन्डियन एक्सप्रेसमा यससँगै उनको परिवारबारे खबर बिस्तृतमा सार्वजनिक भएको छ ।
गत साता आक्रमणको केही घण्टामै जैश ए मोहम्मदले उक्त हमलाको जिम्मेवारी लियो । सँगै हमलाको नेतृत्व उनै अदिल दरले गरेको भनी समाचार सार्वजनिक भएको हो ।
त्यसबेला सार्वजनिक भएको भिडियोमा जैश ए मोहम्मदको ब्यानरको अघिल्तिर दर ट्याक्टिकल गियरसहित राइफल बोकिरहेको तस्बिर पनि देखिएको थियो । जब कि, एक वर्षयता नै उनी पुलवामा आक्रमणको तयारीमा रहेको पनि बताइएको छ ।
‘अन्ततः उक्त भिडियो सार्वजनिक भयो, अब म स्वर्गमा आनन्द लिइरहेको हुनेछु,’ उनले भनेका थिए, ‘म गर्व गर्छु…म इस्लामको वास्तविक प्रवर्तक हुँ र मेरो नाम सुनौलो अक्षरमा लेखिने छ ।’ साथै उक्त घटना सुरुवात मात्रै भएको पनि बताइएको थियो । हमलाको लागि सिआरपीएफ अधिकारीका लागि ल्याइएका गाडीको लाइनतर्फ अदिमले ३५० केजीको विस्फोटक पदार्थसहितको महिन्द्रा स्कार्पियो ड्राइभिङ गरिरहेका थिए ।
सिआरपीएफका अधिकारीका अनुसार जब विस्फोट भयो दुईवटा बस बिक्षिप्त भए । जसमध्ये एउटा बसले ३९ जना सुरक्षाकर्मी बोकिरहेको थियो । घटनालगत्तै सुरुमा ४० जनाको ज्यान गए पनि अहिलेसम्म त्यहाँ मृत्यु हुनेको संख्या ४४ पुगिसकेको छ ।
सोही घटनालाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच थप तनाव बढ्दो छ । भारतले पाकिस्तानलाई घटनामा संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ भे पाकिस्तानले प्रमाण विना आरोप लगाउन नपाउने भन्दै त्यसको कडा प्रतिवाद गरेको छ ।
(प्रिन्ट, इन्डियन एक्सप्रेस र एनडिटिभीमा प्रकाशित समाचारको आधारमा)